Ahoana no fomba ahafahan'ny horonan-tsarimihetsika mihetsika afaka mitondra ny fampielezan-kevitro amin'ny web site
Nandritra ny folo taona farany, nanjary teknika ara-barotra mahery vaika ny lahatsary izay ahafahan'ny tompon'ny tranonkala manintona mpanjifa maro kokoa ary hampiakatra ny vidiny. Ny lazan'ny fampiroboroboana video dia voafetra ihany ny hitombo bebe kokoa. Amin'izao fotoana izao, araka ny angon-drakitra statistika, maherin'ny 60% amin'ireo mpivarotra an-tserasera no mampiasa fitaovana ho toy ny fitaovam-pandraharahana, mampiakatra horonan-tsarimihetsika malaza isan-kerinandro. Ny votoatin'ny horonantsary dia manakaiky ny 64% amin'ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala rehetra, ary dia miezaka ny mitombo hatramin'ny 80% amin'ny alàlan'ny fifamoivoizana amin'ny Internet - type sql get charts. Ireo tarehimarika ireo dia azo hazavaina amin'ny fahitan'ny mpampiasa ny votoatin'ny lahatsary. Fohy, mahaliana sy tsy hay hadinoina mba hahafahan'ireo mpampiasa ny taona sy ny lahy sy vavy ho mora hita.
Ny tena anton'ny fandrosoana haingana amin'ny dokam-barotra video dia ny fahombiazan'ity karazana fampiroboroboana ity. Azonao atao ny mampita fampahalalana sarobidy an-tsoratra momba ny tanjon'ny orinasa amin'ny alalan'ny lahatsary fohy iray.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny fanontaniana hoe inona no mahatonga ireo horonantsary matanjaka amin'ny marketing ary inona ireo fomba ahafahana manintona ireo mpihaino marobe amin'ny alalan'ny fikarohana horonan-tsarimihetsika malaza.
Ahoana no ahafahan'ny orinasanao mandray soa avy amin'ny fananana ao amin'ny YouTube?
YouTube no dingana faharoa lehibe indrindra eran-tany taorian'ny Google. Saika ny olon-drehetra eny amin'ny planeta iray farafahakeliny indray no nampiasa ity app ity ho an'ny fikarohana sy fialamboly. Araka ireo antontan-kevitra momba ny antontan'isa, ireo mpisera isan'andro dia mijery horonantsary an-jatony tapitrisa ao amin'ny YouTube, mitondra fifamoivoizana goavana be mankany amin'ny sehatra manentana. Izany no mahatonga ny fanatrehanao matanjaka eo amin'ity seha-pifaneraserana media ity dia mety hitondra tombony betsaka amin'ny endrika fifamoivoizana sy fiovam-po.
Amin'ny alalan'ny votoaty video, dia azonao atao ny mampiseho ny mpanjifantenao izay tiany ho fantatra momba ny vokatrao na ny serivisinao. Azonao atao ny maneho azy ireo ny lafiny tsirairay amin'ny vokatrao sy ny fomba ahafahan'izy ireo ho sarobidy ho azy ireo. Ohatra, raha manao akanjo manokana ianao, dia azonao atao ny mampiseho ny mety ho mpanjifa ny fomba fijeriny amin'ny fiainana andavanandro na ny fomba ahafahan'ny olona mampifangaro ny singa samihafa amin'ny mpiasa anao. Noho izany, toy ny fampisehoana fotsiny ny mpanjifanao sary an-tsary na manome lohahevitra sarotra an-tsoratra, dia azonao atao ny manolotra fampahalalana mahasoa rehetra, izay mamporisika azy ireo hanaraka ny rohim-pandraharahanao ary mametraka baiko, amin'ny horonan-tsarimihetsika finday.
Tsara ny manisy fiheverana manokana ny lohateninao sy ny fanoritsoranao, satria manampy ny mpanjifa mety hahita ny votoatin'ny video ao amin'ny YouTube. Ataovy azo antoka fa mampiasa ny sasantsasany momba ny tsenan'ny fikarohana momba ny tsenan'ny lozanao amin'ny lahatsarin'ny lahatsary ianao. Ankoatra izany, miezaha hanazava io fanazavana io, fohy sy manan-danja.
Ampiasao ny CTA ao amin'ny horonan-tsaryo mba hanentanana ireo mpitsidika hiditra amin'ny pejin'ny YouTube anao ary avy eo any amin'ny sehatra fototra anao.
Mba hanatsarana ny horonan-tsary fijerena horonan-tsary dia araho tsara ny mombamomba anao. Voalohany, ny lahatsarinao dia tokony hifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpiserasera ary ahitana fampahalalana sarobidy, fa tsy dokam-barotra fotsiny.
Ny mpandraharaha ara-barotra dia manome toro-hevitra amin'ny fanaovana fampihetseham-po amin'ny lahatsary roa manan-danja indrindra - ara-pihetseham-po sy ara-panabeazana ho toy ny lahatsary mahomby indrindra izay mahatonga ny mpampiasa hampihetsi-po sy hampianatra ny olona ny fomba hanaovana zavatra. Amin'ny alalan'ireto karazana lahatsary roa ireto, dia mety mamorona fanentanana ara-barotra ao amin'ny YouTube ianao ary manintona ny mpihaino anao amin'ny tranokalanao.